अर्थतन्त्र Archives - इ कान्तिपुर टाइम्स
आजबाट बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथी छलफल
इ कान्तिपुर टाइम्स १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०८:४९ 0
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल हुँदैछ । बिहीबार बिहान ११ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्‌मा छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्तुत् गर्ने
इ कान्तिपुर टाइम्स ११ बैशाख २०७९, आईतवार १२:४० 0
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला रु. एक लाख ५०० तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु. एक लाख ९०० मा कारोबार भएकोमा आज प्रतितोला रु. ४०० ले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु. एक लाख तोकिएको छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु. एक लाख ४००
इ कान्तिपुर टाइम्स ११ बैशाख २०७९, आईतवार १२:३५ 0
काठमाडौं । बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने आसपासका बासिन्दाका लागि साधारण शेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित रु १० करोड मूल्य बराबरको १० लाख कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ)को बिक्री खुल्ला गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी (रु एक अर्ब) को १० प्रतिशतले हुने रु १०० अङ्कित दरका १० लाख कित्ता शेयरमध्ये आयोजनाको मुख्य संरचना क्षेत्रमा पर्ने लमजुङ जिल्लाको क्व्होलासोथार
इ कान्तिपुर टाइम्स २ बैशाख २०७९, शुक्रबार १०:३७ 0
काठमाडौं । सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित रु. तीन करोड ९५ लाख ३३ हजार ६०० बराबरका तीन लाख ९५ हजार ३३६ कित्ता साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो । कम्पनीले कूल निष्काशनमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ७६६ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोष र जारी पूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत
इ कान्तिपुर टाइम्स २८ चैत्र २०७८, सोमबार १९:५३ 0
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा आर्थिक संकटको अवस्था आयो भनेर गलत प्रचारबाजी भइरहेको बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट नआएको दाबी गरे । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट आएको छैन । जसरी अर्थतन्त्रमा संकट आयो भनेर प्रचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आम जनमानस र व्यवसायिक जगतलाई हतोत्साहित गर्न हुँदैन, राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा गयो भनेर प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था
पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत कम गर्ने सरकारको तयारी
इ कान्तिपुर टाइम्स २८ चैत्र २०७८, सोमबार १९:४४ 0
काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रलयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत कम हुने गरी कटौती योजना बनाइएको जानकारी दिए । सरकार र सरकारी निकायमा प्रयोग हुने इन्धनको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उनले जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको
इ कान्तिपुर टाइम्स २५ फाल्गुन २०७८, बुधबार १२:४१ 0
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च पुगेको हो । महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २५ सय रूपैयाँले बढेर १ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै तेजावी सुनको प्रतितोला १ लाख ५ हजार पुगेको छ । यसैगरी बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४० रूपैयाँले बढेको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला
ईन्धन खरिदका लागी निगमलाई चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने
इ कान्तिपुर टाइम्स २४ फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०५:५० 0
काठमाडौं । सरकारले सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषको आज बसेको बैठकले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो किस्ता बापतका नपुग रु चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गत बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपश्चात पनि १५ दिनमा करिब दुई अर्ब ५० करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । पछिल्लो
तरकारी बजारमा आगलागी हुँदा पाँच दर्जन बढी स्टल जलेर नष्ट
इ कान्तिपुर टाइम्स २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०५:५३ 0
काठमाडौं । काठमाडौंको बनस्थलीस्थित ढुङ्गेधारामा रहेको तरकारी बजारमा आज बिहान आगलागी भएको छ । बिहान १ बजेतिर सुरु भएको आगलागी २ बजेतिर नियन्त्रणमा आएको महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आगलागीका कारण ७० वटा तरकारीका स्टल जलेर नष्ट भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बनस्थली नजिकै रहेको ढुङ्गेधारास्थित तकदिर रत्न शाक्यद्वारा सञ्चालित तरकारी तथा फलफूल बजारमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ । क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको र